China Cable moto unodzivirira kupfeka fekitori uye vagadziri Weicheng
Chigadzirwa Chigadzirwa Cable isina moto kupfeka
Tsanangudzo Model 25kg / dhiramu
Makuriro Ekushandisa Inoshandiswa zvakanyanya kune murazvo unodzora kurapwa kwewires netambo mumagetsi magetsi, maindasitiri uye
migodhi, kutaurirana uye zvivakwa zvevanhu;
inogona zvakare kushandiswa pakudzivirira moto kwehuni
zvivakwa, simbi zvimiro, uye zvinopisa
substrates muivhu repasi peinjiniya.
Chigadzirwa Makomborero 1. Firimu rakatetepa uye yakanakisa kuramba moto. Kuvaka kuri nyore, kukwesha, kupopera, nezvimwe.
3. Kuchengetedza moto kwakanaka uye kusagadzikana kwemvura
4. Yunifomu uye dense chipanji furo dura rinoumbwa mushure memoto,
iyo ine yakakosha moto uye kupisa kupisa maitiro
Iyo CDDT-AA mhando tambo inodzora moto unodziya ndiyo mhando nyowani yemoto unodzora unodzivirirwa nekambani yedu zvinoenderana nematanho eGA181-1998 Ministry of public security. Chigadzirwa chinogadzirwa nemhando dzese dzemoto-dzinodzora, plasticizer zvichingodaro. Ndiyo tambo yepamusoro yemvura nemagetsi munyika.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya pakurapa moto kurapa tambo netambo mumagetsi magetsi, migodhi, kutaurirana uye zvivakwa zveveruzhinji. Inogona zvakare kushandiswa pakudzivirira moto kwezvinhu zvinopisa zvinogadzirwa nehuni chimiro, simbi mamiriro zvivakwa uye pevhu mainjiniya.
Pamberi pekuvakwa kwetambo yemoto inodzora, guruva rinoyangarara, tsvina yemafuta uye sundries pane tambo yepamusoro inofanira kucheneswa nekukwenenzverwa, uye kuvakwa kweanodzora moto kupfeka kunogona kuitiswa mushure mekunge pakaoma.
Iko kupfekedza moto kunodzora tambo kunosaswa uye kukweshwa, uye kuchasanganiswa zvizere uye zvakaenzana kushandiswa. Kana iko kupfeka kukakora zvishoma, inogona kusanganiswa neyakaringana mvura yemupombi kuita kuti kupfapfaidza.
Isina mvura uye inopesana nekusvibisa kupfeka inofanirwa kuchengetedzwa munguva uye isati yavakwa.
Kune tambo netambo zvine mapurasitiki nematehwe erabha, iyo yekukora ukobvu iri 0.5-1 mm, uye huwandu hwekupfeka hunenge 1.5 kg / m, kune yakasungirirwa tambo yakarongedzwa nepepa remafuta, rukanda rwegirazi jira rinofanira kuputirwa kutanga , uye ipapo kupfeka kunozoshandiswa. Kana iko kuvaka kuchiitwa panze kana munzvimbo ine hunyoro, inoenderana varnish ichawedzerwa.
Iyo tambo isina moto yekupfeka inofanira kurongedzwa musimbi kana mapurasitiki emiti.
Iyo tambo yemoto inodzora inodziya inofanirwa kuchengetwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma uye ine mweya.
Kana uchifambisa, chigadzirwa chinofanira kuchengetedzwa kubva kuzuva.
Iyo inoshanda yekuchengetera nguva yenguva yemoto tambo inonamira ndeyegore rimwe.
Pashure: Kwakavharwa nenyama fireproof chisimbiso
Zvadaro: Jira risingadziviri moto uye Silicone Tepi